ICrocodile Hunter, uSteve Irwin Ubulawe eneminyaka engama-44
NgoMsombuluko, Septemba 4, 2006 NgeSonto, Septhemba 30, 2012 Douglas Karr
Ngokuvumelana ne Reuters, USteve Irwin ubulawe yi-stingray namhlanje. Ngizwelana nomndeni wakwa-Irwin kanye nezwe lonke lase-Australia - u-Irwin ube nomthelela omkhulu kwezemvelo nakwimvelo.
Ngiyethemba abantu abakuthathi lokhu ngendlela engafanele, kepha akumangazi kimi ukuthi lokhu kwenzeke. Angikaze ngicabange, ekubukeni uhlelo lwakhe, ukuthi lokhu kuzoba yindaba yokuthi 'uma', bekuyindaba yokuthi 'nini'. Ngaze ngakhuluma nobaba nendodana yami ngakho… Ngangiwuthanda lo mbukiso kodwa ngezwa ngempela ukuthi u-Irwin uthathe izingozi ezithile.
I-Australia ilahlekelwe yindodana enhle futhi enemibala. - UNdunankulu wase-Australia uJohn Howard
Ngikhumbula ngibuka umdlalo owodwa lapho u-Irwin alunywa khona yinyoka angakwazi ukuyikhomba futhi iqembu lonke laphindela emuva ezimotweni zalo ukukhomba ukuthi linobuthi noma cha. Kwakungenjalo, kepha kulapho-ke lapho nginqume khona ukuthi u-Irwin wazibeka engcupheni edlula eyomuntu ojwayelekile. Njengoba isikhathi siqhubeka futhi uqhubeka nokudelela ingozi, akuyona into engokwemvelo ukuzibeka engcupheni enkulu?
Ukube akazange azithathele lezi zingozi, kungenzeka ukuthi akazange alethe ukunakekelwa okungaka embangweni wakhe njengoba enza. Kodwa-ke, angikwazi ukuzibuza ukuthi ngabe bekufanele yini. Kunoma yikuphi, u-Irwin manje ungumfel 'ukholo ngenxa yemvelo kanye nemvelo. U-Irwin wabulawa yiyona nto ayithandayo futhi wayephila ngayo ukufundisa umhlaba.
UNdunankulu wase-Australia uJohn Howard kungenzeka ukuthi washo le nhlekelele kangcono kakhulu, wathi "i-Australia ilahlekelwe yindodana enhle futhi enemibala emihle."
Kubuyekezwe: Indaba kaSidney News